Fanohanana ho an’ny fandraharahana : mitohy ny fifanarahana eo amin’ny AFD sy BFV-SG | NewsMada
Fanohanana ho an’ny fandraharahana : mitohy ny fifanarahana eo amin’ny AFD sy BFV-SG
Vita, ny herinandro lasa teo, ny fifanarahana eo amin’ny AFD (Agence française de développement), nitondra fanohanana GPP (Garantie partielle de portefeuille) ho an’ny banky BFG-SG. Raha ny tena marina, fanohizana ny fifanarahana izany eo amin’ny roa tonta, izay efa nisy nanomboka ny taona 2010. Fiaraha-miasa atao hanampian’ny banky BFV-SG hanohanana ny mpandraharaha malagasy. Miainga avy amin’izany GPP izany ny manamora fampindramam-bola ho an’ny orinasa madinika sy salantsalany (PME). Efa nisy toy izany koa ny fifanarahana teo amin’ny AFD sy ny banky BNI Madagascar, ny 23 jona lasa teo.
Nomarihin’ny AFD fa na eo aza ny fotoan-tsarotra diavin’ny firenena noho ny antony politika, miasa hatrany ireo sehatra mpikirakira vola. Mitombo ihany, ohatra, ny petra-bola any amin’ny banky sy ny fampindramam-bola. Na izany aza, saika avy any amin’ireo orinasa lehibe ny petra-bola be indrindra any amin’ny banky.
Sarotra amin’ny ankapobeny ho an’ireo banky eto an-toerana ny mifandray amin’ny orinasa madinika sy salantsalany. Hita ihany koa anefa fa ireo sampana mpampindram-bola madinika (micro finance) no lasa mahazo vahana mifaninana mivantana amin’ny banky. Misongadina izay fifaninanana izay amin’ny tanàn-dehibe. Any amin’ny tontolo ambanivohitra sy saro-dalana, mbola tsy hita izany fifandraisana izany na amin’ny micro finance aza, indrindra fa amin’ny banky.